DataNumen: Kit fampandrosoana ny lozisialy ho an'ny mpamorona
Home > mpandraharaha
Kit fampandrosoana ny lozisialy (SDK) ho an'ny Developers
Ho an'ny vokatra rindrambaiko fanarenana angon-drakitra tsirairay dia manome koa mifanentana izahay kit fampandrosoana ny rindrambaiko (SDK). Ireo mpandraharaha dia afaka miantso ny interface programa fampiharana (API) miasa ao amin'ny SDK hifehy mivantana ny fizotrany fanamboarana ary hampiditra ireo teknolojika fanarenana data tsy manam-paharoa amin'ny vokatra lozisialy misy azy ireo.
Ny fonosana SDK dia misy rakitra SDK DLL, antontan-taratasy ary kaody santionany amin'ny fiteny fandaharana samihafa amin'ny fampiasana ireo API.
Afaka mandrindra programa amin'ny:
Microsoft Visual C ++ ao anatin'izany ny C # sy .NET
Microsoft Visual Basic ao anatin'izany ny VB .NET
Izay fiteny fandaharana izay manohana ny antso DLL
Misy karazany telo ny maodely fahazoan-dàlana ho an'ny SDK:
Fahazoan-dàlana ho an'ny mpamorona: Avelao ny isan'ireo mpamorona hampiasa ny SDK hampivelatra ny fampiharana azy ireo. Ohatra, raha mividy fahazoan-dàlana iray ho an'ny mpamorona iray, dia mpandraharaha iray ihany no afaka mampiasa ny SDK hampivelatra ny fampiharana azy. Mariho azafady izy TSY AFAKA zarao indray ny SDK DLL miaraka amin'ny fangatahany raha tsy efa nividy fahazoan-dàlana maharitra na fahazoan-dàlana tsy voafaritra voafaritra etsy ambany izy.
Lisansa Runtime: Avelao ny isa manokana an'ny SDL DLL SDK azo zaraina indray miaraka amin'ilay fampiharana. Ohatra, raha mividy fahazoan-dàlana 10 mandime izy, dia afaka mizara 10 dika mitovy amin'ny SDK DLL miaraka amin'ny fangatahany izy.
Lisansa tsy misy Royalty: Fahazoan-dàlana ny isa tsy voafetra ny SDK DLL azo zaraina indray halefa miaraka amin'ilay fampiharana. Mitovy amin'ny lisansa runtime tsy manam-petra io.
Please Mifandraisa aminay hahazoana fampahalalana amin'ny antsipiriany bebe kokoa na mangataka kinova fanombanana maimaimpoana amin'ny fonosana SDK.